Football bụ ihe kasị ewu ewu na egwuregwu gburugburu ụwa. Ndị ọzọ egwuregwu dị ka baseball, Rugby ma ọ bụ nte bụ inweta mma ma ahuhu maka football bụ ọtụtụ ufiop. Egwuregwu a nwere emepụta ụfọdụ oké superstars. Nkiri ma Fans bụ crazy ha, ma Fans bụ bụghị obere mmasị banyere nwunye ha na enyi nwaanyị. Ọzọkwa ụfọdụ nne na-abịa ekiri site nnukwu mmasị n'etiti Fans n'ihi ya àgwà na mara mma ahu udi. Ndị a niile bụ akụkụ nke oké egwuregwu nke nyeere football ụwa cup ghọọ "Kasịnụ Gosi na Ụwa". Dị ka a n'ihi Fans gburugburu ụwa na-na-ekiri Football ụwa cup nakwa dị ka nchọgharị na-ahụ n'anya na-anakọta ozi banyere edu nsị si WAGS na nwanyị nkiri. N'ebe a, anyị atụlewo banyere ụfọdụ football metụtara ndị inyom bụ ndị dọtara ụfọdụ ezigbo mmasị nke ndị mmadụ gburugburu ụwa na dị iche iche ụwa cup ndorondoro gụnyere a 2014 FIFA World Cup.
Age: The afọ Victoria bụ 40 ugbu a. Ọ nọgidere na etiti nke ìgwè mmadụ mma na FIFA 1998 ụwa cup football. N'oge ahụ, ya afọ bụ 24.
Gịnị mere o nwetara / na-anya: E nwere ọtụtụ ihe mere ya mma. Victoria bụ onye òtù nke kasị ewu ewu na nwanyi pop music ìgwè 'ose Girls'. Ya ewu ewu akụkụ gbanwere na 1997, mgbe ọ malitere na-akpa na British edu nsị David Beckham, mgbe ha izute ọ bụla ọzọ na a football egwuregwu. Na 1998, ha mara ọkwa ha aka na on 4th July 1999 ha lụrụ. Na FIFA 1998 ụwa cup football ndorondoro, di na nwunye a na-ejide nnukwu mmasị site na ndị mmadụ gburugburu ụwa. Ihe mere ndị dị otú ahụ nnukwu mmasị bụ n'ihi ya ịrịba udi na ahụkebe olu. Ọzọkwa, ya na di ya Beckham ahụ bụ otu n'ime n'elu kasị ewu ewu na football egwuregwu. Ke adianade do ha abụọ bụ ndị British. Ya mere, mma site maka ha bụ nnukwu ruru media. World media mgbe kpọrọ Victoria dị ka "Queen nke WAGs". Victoria mgbe niile nọgidere a fashionable nwanyị.
Ugbu A ọrụ: Ọ bụ ugbu a ọrụ n'aka na ya onwe azụmahịa na ogbo egosi.
Age: ya afọ bụ ugbu a 36, ​​ma ọ na-ejide ụfọdụ dị oké njọ uche nke ndị dị iche iche gburugburu ụwa na ya afọ nke 20. Ọ mụrụ ya na July 20, 1977 na Rio de Janeiro nke Brazil.
Gịnị mere o nwetara / na-anya: E nwere ụfọdụ kpọmkwem ihe mere na-ama. Ọ bụ na Brazil Omee na nlereanya. N'oge 1998 FIFA World cup Football Suzana ghọọ ihe ndị kasị mara mma nwanyị na-abịa ekiri dị ka ọ bụ nwa agbọghọ enyi nke Brazil football Superstar Ronaldo. O were nkiri ahụ oche ọ bụla egwuregwu na egwuri site Brazil. O nwere ihe ndị magburu onwe udi na afọ na magburu onwe anya. Ya yi Uwe na àgwà bụ karịa na iji na-adọta ndị mmadụ si na-adọrọ mmasị.
Ugbu A ọrụ: Ugbu a, ọ lụrụ na Brazil goalkeeper Julio Cesar na nwere 2 ụmụ.
Age: A mụrụ ya na February 2, 1977 na Barranquilla, Colombia. Ya onyinye afọ bụ 36. Ọ na-ekwu okwu nke 2010 FIFA World cup Football ndorondoro.
Gịnị mere o nwetara / na-anya: Shakira si song 'Waka Waka' bụ ukara song maka 2010 FIFA ụwa cup football. Ọ na Spanish agbachitere Gerard Pique wee nso onye ọ bụla ọzọ mgbe ha abụọ na-arụ ọrụ ọnụ iji wuo na music video nke 'Waka Waka' song. The song bụ ezigbo okpomọkụ, ka Shakira. Dị ka nna ya bụ site Lebanon, o nwere n'ike mmụọ nsọ na-amụta afọ agba egwú. Na ụwa otu nke kasị mma butt, ya na ikpọ ogbo egwú ka-aghọkwa ihe ịga nke ọma. Na 2010 FIFA ụwa cup di na nwunye nọ center nke na-adọrọ si ndị mmadụ gburugburu ụwa. Asịrị e ekesa banyere ha na-akpachi anya. Shakira eze kwadoro mmekọrịta ha na March 29, 2011.
Ugbu A ọrụ: On March 25,2014 ya 10th album a tọhapụrụ ya.
Age: Ya onyinye afọ bụ afọ 30. Enye akamanade ke Toledo on 3rd February, 1984. Ọ na uche ndị dị iche iche gburugburu ụwa na 2010 FIFA Football World cup mgbe ya afọ bụ naanị 26.
Gịnị mere o nwetara / na-anya: Sara bụ otu n'ime n'elu egwuregwu nta akụkọ nke Spanish media. Na July 2009 ọ e tozuru oke ka Sexiest Reporter na ụwa site American mbipụta nke FHM. N'oge 2010 FIFA ụwa cup o weere N'ajụjụ ọnụ nke Spain goalkeeper Casillas n'oge egwuregwu n'etiti Spain na Switzerland. Ọtụtụ ndị na-ọkọdọhọ ya maka na ama ọnwụ na ahụhụ site Spain n'ihi na nyochaa, ebe Casillas furu efu ịta. Mgbe ahụ Fan si nke Casillas gburugburu ụwa gosiri mmasị ha na ya. O nwere nnọọ ebughibu ma ike ọgụgụ. Ọ bụ mara mma na nwere mma ọnụ ọchị. N'ikpeazụ, Sara na Casillas ghọrọ onye òtù ọlụlụ.
Ugbu A ọrụ: Ọ bụ ugbu a a nne nke a mara mma nwa okoro na nwa ewu na aka iso ya oru ndi.
Age: Ọ bụ ugbu a 29. Ọ na ige nti na 2010 FIFA ụwa cup football mgbe ya afọ bụ 25.
Gịnị mere o nwetara / na-anya: Ọ bụ n'elu Paraguayan nlereanya. O nwere ọchịchọ enwetaghị anya nke media site na-eme ahụkebe ihe. N'oge 2010 FIFA World Cup ọ ghọrọ ma ama dị ka a supporter nke Paraguay mba football otu. Mgbe ememe a mgbaru ọsọ ahụ e nyere site Paraguay ọ na-etinye ya mobile set na n'agbata ara ya abụọ. Na-esonụ na omume, o wee ghọọ ihe ndị kasị-achọgharị onye na internet. E mesịa, ọ mara ọkwa na ọ ga-agba ọsọ gba ọtọ ma ọ bụrụ na Paraguay iru ọkara ikpeazụ site na-eti Spain. N'ikpeazụ, ha nwere ike ọ bụghị ma ọ mere ya dị ka kwere ná nkwa. O nwere mara mma anya na magburu onwe ọgụgụ. Ya ọtọ foto n'ihu Paraguay ọkọlọtọ na-ekpo ọkụ achicha ke internet mgbe ụwa cup.
Ugbu A ọrụ: Ọ bụ ugbu a a top nlereanya ka dị iche iche nnukwu ụdị.
Age: A mụrụ na Russia na January 6, 1986. Ugbu a, ọ bụ 28 afọ agadi. Na ụwa a cup ọ na-adọta ìgwè mmadụ anya n'ihi ya nwata enyi aha ya bụ Cristiano Ronaldo.
Gịnị mere o nwetara / na-anya: Ọ na ọ bụla ntị mgbe ọ malitere na-akpa na ibu kpakpando na edu nsị Cristiano Ronaldo ebe May 2010. Ma nke ha zutere mgbe ha campaigned maka Armani Exchange. Na afọ a ụwa cup 2014 di na nwunye a adọrọwo anya nke ụwa nke ukwuu, nke mere na; ha na-enwe iti Victoria na David Beckham di na nwunye. Ya elu bụ 5 ft 10 na na ọnụ ọgụgụ nke 34-23-35. Irina jụrụ maka dị iche iche na-ekpo ọkụ foto nke ya mara mma ọgụgụ; nka bu kwa ihe a mere na-nkiri. Ọ nọ na-tozuru oke sexiest nwaanyị na ụwa maka afọ 2011 site Hungarian magazine Periodika.
Ugbu A ọrụ: nso nso o kwuru ya eme ọrụ, na fim Hecules.
Age: Ọ na-na-adọrọ uche na ụwa a cup na ugbu a ya afọ bụ 26.
Gịnị mere o nwetara / na-anya: Ọ bụ onye nke Argentine megastar edu nsị Messi. Ha maara onye ọ bụla ọzọ sayensị nwata. Na 2008 mgbe Messi gara n'ụlọ ya obodo, ha zutere na-ada na ịhụnanya ọ bụla ọzọ. Ọ na-nọgidere na-adọrọ uche ndị mmadụ n'ihi ya obere uwe post na dị iche iche na-elekọta mmadụ media peeji nke. O nwere mma ọgụgụ na magburu onwe ọnụ ọchị ya ihu.
Ugbu A ọrụ: Ha nwere mara mma nwoke.
Age: ya afọ bụ ugbu a 31 a mụrụ na 23 September 1982. Ọ na-na-uche na ụwa a cup dị ka ikpeazụ ụwa cup.
Gịnị mere o nwetara / na-anya: Ọ bụ nwunye England onyeisi Steven Gerrard. Ọ bụ otu n'ime n'elu nwunye n'etiti ndị niile na edu nsị nke ụwa a cup. O nwere mma ahu udi na nha 36-24-34. Ya elu bụ 5 ft 9. Ọ bụ ejiji nlereanya na ejiji columnist. O nwere mma ụkwụ na ekpo ọkụ nke ukwuu anya.
Ugbu A ọrụ: Ọ na-ede kwa izu kọlụm maka Daily Mirror akpọ "gaa zụọ ahịa na Alex Curran".
Age: Ọ na-na-ntị maka ụwa a cup na ya afọ nke 39. Ọ mụrụ ya na 4th June 1975
Gịnị mere o nwetara / na-anya: Ọ bụ onye nke na-ewu ewu Spain na edu nsị Cesc Fabregas. Ha na-akpa ebe June 2011. Ma nke ha nọ na-achụ dị iche iche mmadụ. Daniella lụrụ bụbu-di Elie Taktouk na Cesc e ịnọgide na-enwe mmekọrịta na nwata enyi Carla Garcia. Mgbe ahụ Daniella na Cesc zutere na London. Ọtụtụ ndị na-ọkọdọhọ Daniella maka breacking elu nke gara aga Cesc na Carla mmekọrịta. Daniella ga-n'elu Milf WAGS maka ụwa a cup tinyere Shakira. O nwere oké anya na-ekpo ọkụ ọnụ ọgụgụ.
Ugbu A ọrụ: O nwere 2 ụmụ ya gara aga di na Cesc na o nwere otu nwa agbọghọ eyen.
Age: Ọ bụ ugbu a 23. Ọ a mụrụ na Deceber 6, 1989.
Gịnị mere o nwetara / na-anya: Ann bụ a German nlereanya na-agụ egwú. Ọ bụ nwa agbọghọ enyi nke ekwe German football ọkpụkpọ Mario Gotze. Ha zutere onye ọ bụla ọzọ na 2012 na-amalite na-akpa. O nwere ọtụtụ na-ekpo ọkụ foto nke ya na internet na anya otú na-ekpo ọkụ. Ọ maa na-aga na-adọta ndị mmadụ na ya mma ọgụgụ. Ugbu A ọrụ: nso nso ọ na-ede blọọgụ on ejiji, music wdg
E nwere ọtụtụ na-akpa ọchị akụkọ n'azụ FIFA World Cup na ndị niile na akụkọ pụrụ dere na-azọpụta site foto na vidiyo. Ọ bụrụ na ị mkpa ụfọdụ ngwaọrụ iji chebe ndị obi ụtọ na-echeta, tụlee Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), nke bụ ike ma mfe na-eji video nchịkọta akụkọ / onye n'ihi na ọrụ dị malite si. Download free ikpe version n'okpuru.
> Resource> Video> Top 10 Women onye nwetara Hot N'oge FIFA World Cup